Haleellaa Waraanni Liyyuu Poolisii naannoo Soomalee magaalaa Mooyyaalee keessatti raaawwateen namoonni lama ajjeefamuun 4 ammoo madaa'an - NuuralHudaa
Haleellaa Waraanni Liyyuu Poolisii naannoo Soomalee magaalaa Mooyyaalee keessatti raaawwateen namoonni lama ajjeefamuun 4 ammoo madaa’an
On Jul 6, 2018 35
Guyyaa kaleessaa fi hardhaa waraanni liyyuu poolisii naannoo Soomalee magaalaa Mooyyaalee keessatti haleellaa hamaa raawwataa kan jiru tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa.
Loltoonni Liyyuu poolisii ganama hardhaa nannawa Caamuqii fi Abbituu jedhamutti konkolaataan magaalaa Mooyyaalee akka hin seenne rasaasa itti dhukaasaa akka turanii fi waaree booda ammoo humna cimsatuun dhalattoota Oromoo 4 kan madeessan tahuu Waajirri Dhimmoota Komunikeeshiinii m godina Booranaa gabaase.
Loltoonni liyyuu poolisii guyyaa kaleessaatis achuma magaalaa Mooyyaalee keessatti haleellaa raawwataniin namoota lama kan ajjeessan tahuun beekameera. Dabalataanis Waajjira Gumruukii fi manneen jireenyaa hojjattoota gumruukii dabalatee konkolaatota 9 ol ibiddaan kan barbadeessan tahuu gabaasni arganne ni ibsa.
MooyyaleeWeerara Liyyuu Poolisii NS
May 22, 2022 sa;aa 12:49 pm Update tahe